Umhla My Pet » 6 Imibuzo Izibini Ukuba Cinga Ngaphambi kokuba ufumane Pet
ukubuyekezwa: Jan. 19 2021 | 3 min ukufunda
nomfanekiso oko: Ukuba umfumene umntu okhethekileyo, nolwalamano lwakho Intle. Kodwa i wenza ntoni xa abanye yakho ebalulekileyo icebisa ukuthatha ekwandeni nokwenza ukuzinikezela omnye komnye…ngokuthi isilwanyana? Phambi kokuba ugalele ukuba inja okanye ikati ebomini bakho, cinga ngokugcina mibuzo ilandelayo engqondweni.
"Ngaba thina sobabini ufuna isilwanyana?"
Ukuba isilwanyana ebomini bakho kunokuba ngamava owanelisayo ubomi akajiki. Kwakhona imali eninzi nexesha elide, ne ASPCA ukuqikelela baneshologu-ubungakanani inja zinokubiza umlinganiselo $1,580 ngonyaka ukutya nganye, iindleko wezilwanyana, kunye nabanye, ngexesha ikati zinokubiza umlinganiselo $1,035 ngonyaka. Isigqibo ukufumana nesilwanyana kufuneka Mutual, kwaye kufuneka zenziwe elide phambi kokuba dibanisa inja, ikati, okanye esinye isilwanyana ebomini bakho. Gcina engqondweni enye yakho ebalulekileyo ukuze abe mathidala ukuba isilwanyana; ukuba oko kunjalo, ke ukuhlonipha izimvo zabo kwaye cinga obambe edlulisela ekhaya isilwanyana elitsha. Ukuba omnye kuni sele isilwanyana, ngoko kufuneka siqwalasele iimfuno isilwanyana wakho xa esenza isigqibo.
"Yintoni uhlobo pet kunene kuthi?"
Ukuba emela Uyabaleka ngentsasa yangoMgqibelo epakini kunye Labrador, kodwa ezinye yakho ebalulekileyo nto ucinga ukuthenga itanki oxandileyo zeentlanzi, ke kufuneka uthethe ngezinto uhlobo lwesilwanyana zombini ufuna. Thatha ingqalelo naziphi nokwalisa wena okanye ezibalulekileyo ezinye yakho, ubungakanani indawo yakho yangoku eziphilayo, Iishedyuli zomsebenzi wakho, kunye nemali xa isigqibo isilwanyana. Sebenzisa eli thuba ukuxoxa ubungakanani pet ofuna, kakhulu. Inja enkulu kubakho iingxaki kunye neendleko ngaphezu nenja lengubo encinci.
"Zingaphi izilwanyana sifuna, kunjalo?"
Ngelixa wena nabanye yakho ebalulekileyo ukuze bevumelene uhlobo lwesilwanyana ofuna, Ufuna kwakhona avumelane ukuba zingaphi izilwanyana. Kunye pet nganye olongezelelweyo, luxanduva lwakho neendleko ezinxulumene yokunyamekela isilwanyana izokwandisa. Gcina engqondweni nayiphi na imithetho nemimiselo ukuze isicelo ngokwemiqathango ukuba zingaphi izilwanyana unokuba, ingakumbi ukuba kwindawo yengqesho.
"Uya kuphila phi pet?"
Kwezinye izibini, abahlala kunye ayisosizathu ngenxa yezizathu ezininzi. Ukuba wena nabanye yakho ebalulekileyo ningahlali kunye, ke kufuneka wenze isigqibo Fido okanye Fluffy uya kuhlala apho. Umzekelo, uya isigqibo ukugcina nesilwanyana lakho kwikhaya iqabane lakho ngoxa ngeveki, nisenalo pet ngempela-veki? Xa isigqibo ilungiselelo, into kwi iishedyuli zomsebenzi yakho nendlu lwangoku okanye igumbi.
"Ngubani onoxanduva kukhathalelo pet?"
Ukuba wena nezinye iindleko rhoqo uqikileke ebonakalayo, ke isigqibo ngubani onoxanduva kukhathalelo pet ukuze Moot. nokuba, ukuba u nga soloko ngokulinganayo iindleko ukwahlula, okanye ukuba omnye kuni kwenza ngaphezulu kakhulu ngaphezu kwezinye, isigqibo ngubani ofanele ukuhlawula amatyala lwezilwanyana kunye nokutya isilwanyana ingxoxo kufuneka ube nezinye yakho ebalulekileyo phambi kokuba yoyigodusa ikati entsha okanye inja.
"Siya kuyifumana phi isilwanyana?"
Wena kunye neqabane lakho ninokuba bevumelene ngokwenza omnye uhlobo oluthile pet. Kodwa uya kufumana apho inja yakho entsha, ikati, okanye ucwethe? Mhlawumbi omnye kuni akabafuni malunga izilwanyana ababethengiwe evenkileni okanye nowabalimi. Ukuba kunjalo, zombini kufuneka abe kwibhodi yaye bayavumelana ngokuphathelele apho ningawufumana isilwanyana.
Ukuba ingxoxo kunye nezilwanyana yakho ebalulekileyo nezinye malunga uhlobo kwaye zingaphi linyathelo elibalulekileyo kulwalamano lwakho. Khumbula ukuba sinyaniseke size sibuxabise izimvo zomnye.
Indlela Ukonwabela Umhla First
3 Tips Great kokudala Best Online Dating Yabucala
5 Izinto ukuba Wingwoman ukuba Khumbula